Ikhaya » izithuba » Iindaba zokuHamba » I-WestJet ityhila umthwalo wempahla ngombane ngoMhla woMhlaba
I-WestJet ityhila umthwalo wempahla ngombane ngoMhla woMhlaba
Aprili 23, 2012
E-CALGARY, Canada-I-WestJet namhlanje ibonakalise ubuchule bayo obutsha kwezendalo, umthwalo wempahla osebenza kwiibhetri ze-lithium polymer ezinokuphinda zisebenze.
E-CALGARY, Canada-I-WestJet namhlanje ibonakalise ubuchule bayo obutsha kwezendalo, umthwalo wempahla osebenza kwiibhetri ze-lithium polymer ezinokuphinda zisebenze. Umtsalane, ofana netrektara encinci, utsala iinqwelo zemithwalo ukuya nokubuya kwinqwelomoya kwaye lolokuqala olo hlobo ukusebenza kolu hlobo lwebhetri.
Njengenxalenye yeprojekthi yokulinga, inqwelomoya yasebenza kunye neCorvus Energy, inkampani yetekhnoloji esekwe eRichmond, ukwenza injineli kwakhona ukuba ixhotyiswe ngeebhetri ze-lithium polymer, isuse isidingo saso nasiphi na isibaso se-fossil ukunika izixhobo. Umtsalane, oqale ukusebenza ngo-Okthobha kwisikhululo senqwelomoya saseCalgary, usebenze ngempumelelo kubushushu obubandayo, ngaphandle kwesehlo, ebusika.
"Ukuphumeza obu buchwephesha butsha yinxalenye ephambili yokuzibophelela kwethu ekuqhubekekeni kozinzo kwindalo esingqongileyo," utshilo uCam Kenyon, uSekela Mongameli oLawulayo waseWestJet. "Njengenqwelo moya, siyakholelwa kutyalo-mali kwiingcinga ezintsha eziza kunceda ukugcina ulondolozo lwethu kunye neendleko zepetroli ziphantsi, ezisivumela ukuba siqhubeke nokuhambisa ixabiso eliphantsi kunye nexabiso eliphezulu kwiindwendwe zethu."
"Ukudityaniswa okuyimpumelelo kweenkqubo zebhetri ye-lithium ion ye-Corvus Energy kwizixhobo zenkxaso yomhlaba yeWestJet kubonisa ubungqina obukhulu kwitekhnoloji yethu," utshilo uBrent Perry, igosa eliyintloko leCorvus Energy. "Ukuqaliswa kwesisombululo se-lithium ion GSE luphuhliso olubalulekileyo kwicandelo lezophapho malunga nefuthe kwindalo esingqongileyo kunye nokhuseleko lwabasebenzi kwaye sonwabile ukuba phambili."
Iinqwelo-moya bezifuna ukuphucula iiyunithi zombane iminyaka emininzi utshilo uPerry. “Ukuza kuthi ga ngoku, isisombululo sethu kukuphela kobuchwephesha bebhetri obungadingi kulungiswa, busebenza kubanda obugqithisileyo okanye kumaqondo obushushu ashushu, kunye nokutshaja ngokukhawuleza kwaye kuphelise iteknoloji ekhoyo. Imele inkqubela phambili enkulu kwicandelo lezokuhamba ngenqwelomoya.
Utshintsho kumandla ombane luvumele inqwelomoya ukuba iqhubeke nokugxila ekusebenzeni kwexesha, njengoko umthwalo ungahanjiswa uye ususwe kwinqwelomoya malunga neenqwelomoya ezili-11 ngosuku ngentlawulo enye.
Ngomhla ka-Meyi, i-tugs ezimbini zempahla yombane ziya kufika e-Whitehorse ukumiliselwa kwenkonzo yemihla ngemihla kule ndawo, eqala ngoMeyi 17. I-airline ilindele ukuba itekhnoloji isebenze kubushushu bemozulu yaseYukon apho iibhetri ze-lead-acid zithande ukubanda kwaye ayinakuphinda igcwaliswe kwakuba ngumkhenkce, kwaye apho iitrokhi ezinikwe amandla zerhasi azivumelekanga kwimithwalo esemgangathweni yenqwelomoya.